Ukuphepha emsebenzini kuhambisana nemithetho nemithethonqubo okudingekayo uma isendaweni yokukhiqiza (nalapho isebenza nemishini ekhethekile). Amabhizinisi okukhiqizwa nokulungiswa kwe-BTWT (izikhali nezikhali zokuzivikela) kusukela ekubukeni kokuphepha, okokuqala, ukulayishwa kwensimu ngokuthutha, izimoto ezikhaliwe kanye nemishini ekhethekile. Ngakho-ke, imfuneko eyinhloko yokuthola iphrofayli efanayo ebhizinisini ihamba ngokucophelela nokuqapha phakathi kweziqephu zamasitshalo.
Ukuze angene emsebenzini, unjiniyela we-HSE uqhuba isingeniso sokuqala emsebenzini wokuphepha emsebenzini. Iqokomisa izinhlinzeko eziyinhloko ezimweni zokusebenza kanye nemininingwane yekampani yokulungisa i-BTWT, izimbangela ezivamile zengozi, imililo, izingozi , njll, kanye nezinyathelo zokuzivimbela. Ngokulandelayo, isisebenzi esisha sizoba nomhlangano oyinhloko emsebenzini, owenziwa yikhulu lomnyango wesitshalo (esitolo). Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokukhiqiza ngokugcwele, isisebenzi sichazwa inqubo yezobuchwepheshe, inikeza ulwazi ezindaweni eziyingozi zemishini, izici eziyingozi kanye nezindlela eziphephile zomsebenzi.
Kunoma yikuphi ukukhiqizwa, umsebenzi wenziwa ngamathuluzi nemishini, edinga ukunakwa okukhethekile nokuqapha. Ngakho-ke, isisebenzi kufanele sithobele zonke izinyathelo zokuqapha ngesisekelo solwazi olutholakala ezinkulumweni ezisenkulumweni nasenhloko.
Ukuphepha emsebenzini kunoma iyiphi ibhizinisi kusekelwe ekugcinweni kwemithetho elandelayo ebalulekile:
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, okokuqala uhlola ukutholakala kwemishini kanye nethuluzi lokusebenza.
Lapho usebenza, qiniseka ukusebenzisa imishini yokuzivikela kanye namadivayisi okuphepha. Izikebhe nama-overalls kufanele kube esimweni esifanele.
Kudingekile ukuba kwenziwe kuphela imisebenzi eyenziwe ngokugcinwa kwazo zonke izidingo ezihlinzeka ngemithetho yokuphepha ekukhiqizeni nasekukhucululeni indle.
Esigungwini sokulungisa imoto, ukusetshenziswa kwe- gantry crane yokukhulula nokulayishwa kwempahla kukhonjisiwe, ngakho-ke umthetho oyisisekelo wokuthi wonke umuntu ofika ebhizinisini kufanele azi ukuthi: umuntu akanakudlula ngaphansi kwekhaneli elihambayo. Kungase kuqukethe izinto zemishini yokusebenza ezokwehla uma i-crane ihamba. Lokhu kusongela ukulimala okukhulu kubantu abangaphansi kwakhe.
Ukuphepha endaweni yokusebenzela kuyohlala nje isimemezelo ngaphandle kokusebenzisa imishini ekhethekile yokuvikelwa, imisebenzi efanele kanye nomsebenzi okufanele kwenziwe. Ukulawula phezu kokuthengwa nokukhishwa kwe-PPE kanye nemishini ehambisanayo inikezwa ngumninimpilo wezempilo kanye nokuphepha webhizinisi.
Ukukhuphuka nokuphepha komlilo endaweni ye-BTWT isitshalo sokukhanda kutholakala ngenxa yokuhambisana namazinga okuthutha nokugcinwa kwe-propane cylinders nokuziphatha kahle kwe-welding operations.
Okusho angiqabule futhi ukubaluleka kwazo ubudlelwane
"Stalker: Bad Company": ukuguqulwa ukudlula
Uhlu lwemibuzo ukuze uqashwe usebenze - indlela yokufunda yonke mayelana nomsebenzi
Benzoin: isihlahla tropical ebamba izakhiwo esiyingqayizivele
Yokudlela eMoscow Biggie. Amazwibela
Elixir intelligence okusheshayo e umdlalo World of Warcraft